Lalao Ravalomanana - Mila fanazavana
MDtsara le Jeu 09 Mai 2013, 10:30
Tiako aloha ny milaza fa izaho dia vehivavy ary tena tiako sy iriko raha vehivavy no mitondra ny firenena fa mila misaina koa, ary zaho koa de anisany nitolona ho an'i Ravalomanana ary naika nanefa ny aina tamin'ny 2002 ary zaho dia anisany ' "DECUE " tanteraka tamin'ny nataony.
Voalohany , Antananarivo dia tsy Madagascar, raha mandeha mianatsimo kely (atsimo antsinana manakara …, atsimo andrefana) mampalahelo ny manjo ny olona any tsy vao izao ataon'i Andry Rajoelina izao ('zay tsy asiana resaka intsony fa tena manimba ny firenena) fa hatramin'izay ary tena malahelo ny nataon"i Ravalomanana ny mponina satria voafitaka tanteraka.
Faharoa, Tena mahavariana mihintsy ity fanampahankevitry Ravalomanana ity 'zany oe ny vadiny no natolony ka mba mila fanazavana mantotra sy mihaja aminareo misaotra indrindra.
Nisy olona anakiray namaly ahy hoe io anarana Ravalomanana io mihintsy no tena ny antony satria efa be mpahalala, marina tokoa izay fa io anarana io koa anefa efa be mpankahala.
-Maninona moa tsy ny anarany antoko no tena no nampiasaina 'zay be mpahalala.
-Mba misy afaka milaza oe inona no afaka ho entin'i Lalao Ravalomanana ho an'i Madagascar ho an'ny Vahoaka Malagasy?
Mialatsiny indrindra fa amiko manonakana dia tena toa ataondry zareo resaka fianankaviana izy ity eh, fantatsika tsara fa Madagascar an'ny Malagasy rehetra fa tsy an'ny fianakaviana Ravalomanana, tena maharikoriko mihintsy ity fitiavamboninahitra fitiavambola fitiavantena ity ka,
- de ahoana moa no ilazana fa i Lalao no mendrika ny hitondra firenena inona no traikefany?
Jereo ange ny any ivelany ‘zay tokony hankana tahaka ihany fa mampandroso firenena, tena maro ny zavatra takiana ho an’olona hitondra firenena izany fianarana ambony, mba manana fahalalana momba ny politique ny firenena ho entiny sy ny politique erantany, mahay miteny eo imasony olona ambony erantany , tena tsy kilalao io fa ny imagintsika Malagasy mihintsy no en jeu izay mila fanavotana haingaina fa efa potika tanteraka noho i Andry Rajoelina…. mila miova mila mandroso.
Ary aoka hanjanona mihintsy amin'izay ny fanonona ny anaran’Andrimanitra fa tena mahamenatra sy maharikoriko atao etiquette fotsiny ny fiangonana aoka izay, olon’Andriamanitra no mitondra ny firenena tena tsara izany fa tsy mila atao rehareha koa.
Farany raha misy eto olona miorona any aminy Ravalomanana dia manantena aho fa tsy faharatsiana be fahatany any Andry Rajoelina sy ny hafa no holazainy fa mba manao fanazavana mihaja momba an'i Lalao Ravalomanana. Sady aoka izay ny fankahalana fa fotoanany fisainana fandinihana sy firaisankina ary fifankatiavana ho any tohiny fiainan'ny Malagasy rehetra izao, ampy'zay fijaliana sy fahoriana ary ny fanaratsiana izay.
Mirary soa ho any Malagasy rehetra.
Re: Lalao Ravalomanana - Mila fanazavana
rouva le Jeu 09 Mai 2013, 10:32
Rehefa tsy tia azy fotsiny ianao dia aza mifidy azy am 24 juillet fa tsy be wawa eo,
Aiza moa ny ahafantaranao hoe tsy mahay politika izy? Ary tsy hoe tsy fahaiza miteny akory ny tsy mampandroso ny firenena, jereo ireny ratsiraka miaiky azy daholo amin ny fahaizany miresaka nefa aiza zao ny firenena nentiny nandritry ny 20 taona mahery? Ary tadidio fa tsy voatery ho hahay izy fa eo ny conseiller ny rehetra ampianatra azy rehefa Tonga eo amin ny fitondrana izy, ary matoa izy milatsaka dia hainy io sady vonona izy ny hianatra
mofodipa le Jeu 09 Mai 2013, 10:35
1.Marina ny voalazan'ireo namana eo ambony hoe rehefa tsy tianao izy dia tsy fidianao.
2.Rehefa deçu ianao nohon'ny nataony dia mijereva olona hafa.
3.Manana zo haneho ny hevitrao ianao ary isaorana anao izany satria tsy nivatravatra ianao fa nanaja ny mpisera rehetra eto tsy toy ny fanaon'ny sasany.
Saingy izao, tsy misy olona tonga lafatra eto ambonin'ny tany.
Raha ny toerana nametrahan'ny filoha Didier Ratsiraka ny firenena dia tany anaty ady mihitsy no nisy antsika ny taona 2002.
Indrindra moa taorinan'ny krizy noforoniny teto.
Mbola teo koa ireo frantsay nanao ny ainy tsy ho zavatra hisakana ny fampandrosoana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana sy nikaroka izay fomba rehetra azo atao hisakanana izany.
Saingy tsy niamboho adidy ny filoha RA8 ary
Etapes tsotra no safidin'ny filoha hampandrosoana antsika.
1.Fanavaozana ny structure macro-économique
2.Fananganana ny fototra ho fampandrosoana (Lalana, lalàna, tontolo ambanivohitra, tsena, infrastructures ...)
3.Fampandrosoana ny tsy miankina
Tsy vita eo noho eo izany fa mila fotoana.
Tsy nateraka ho mpitondra firenena ny filoha RA8 ary tsy nivonona ho ami'nizany saingy nohon'ny tsy azo anoharana dia voatery niditra an'io sehatra io izy ny taona 2000 ka voatery naka toerana ambony indindra nytaona 2001.
Vokatr'izany dia betsaka ny fahadisoana nataony : toy ny detaxation ny taona 2003.Raha ny lojika dia raha esorina ny taxe amin'ny simenitra.Izay namidy 28 000 f tamin'izany fotoana dia tokony ho lasa 24 000 F ilay simenitra.
Saingy nohon'ny antony tsy mazava dia vao maika mampiakatra ny vidin'ny simenitra ny fanesorana ny taxe ka lasa 38 000 F ny simenitra rehefa noesorina ny haba.
Oh faharoa, hoy izy hoe: esorina ny haba ho an'ny fitaova-pamokarana mba ahafahan'ny orin'asa manavao ny fitaovana ampiasainy, saingy ny zava-nitranga dia tsy izany fa lasa nanafatra fiara 4x4 daholo ny olona rehetra dia namboarimboariny ny taratasy dia lasa fitaova-pamoakana ny fiara. Ka lasa niteraka désequilibre macro économique izany dia niteraka dévaluation.
Ny olona tsy dia misaina loatra dia mihevitra fa ho an'ny orin'asa TIKO no antony nanaovana ny détaxation, kanefa ny TIKO dia efa ny taona 1991 dia efa nanomboka ni-moderniser ny ankamaroan'ny ozinina nampiasainy ka tsy dia nila izany loatra izy.
Fifanampiana iraisam-pirenena no nentina nampandrosoana antsika.
Ireo indicateur de performance iraisam-pirenena no nampiasaina: IDE, taux d'inflation, taux de croissance, doing business, TI index, ....
Choix ny azy raha ireo no indicateur noraisiny, ary raha izao dia ireo ihany koa no noraisiko.
Raha ireo indicateurs ireo no jerena dia anisan'ny voalohany foana isika teto ambonin'ny tany amin'ny sehatra fampandrosona.
Croissance soutenue 5,7% no nisy teto.
Ary nanomboka ny taona 2004 dia nihoatra ny 6% izany
Marihina fa mbola tsy nitrandraka ny harena nisy isika tamin'izany fotoana izany nefa dia efa ambony ny taux de croissance. Ary eritreretina fa rehefa firenena mpitrandraka harena ankibon'ny tany isika dia hihoatra ny 10% ny fiharian-karena faobe.
Marihina fa ny solika, ny bauxite, ny ilménite, nickel/cobalt, fer ... no vokatra novisavisaina tamin'izany.
Ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia ireo indicateurs voalazako ireo no jereny amin'ny fampandrosoana.
IZANY NO MAHATONGA HOE: MBOLA BETSAKA NY OLONA MIJERY IREO INDICATEUR IREO IHANY KOA KA MAHATONGA AZY MANOHANA NY FILOHA RA8 ARY MANOHANA NY CHOIX NAPETRANY HOE NY VADINY NO NAROSONY HO FILOHAM-PIRENENA
Tsy hoe adala, na hoe FANATIQUE fotsiny izao akory ireo fa mitovy amin'izao tontolo izao hoe : ireo indicateurs noraisina ireo no nijereny hoe mandroso sa tsy nandroso ny firenena tamin'ny fitondran'ny filoha RA8, ary tsy nitovy tamin'ny indicateur napetrakao ny azy -
Nahiiz le Jeu 09 Mai 2013, 10:37
Marina tenteraka izany voalazanao izany eo ambony io. Anisan'ny zavatra lehibe nataon ny Filoha Ravalomanana koa ny nanova tsikelikely ny foto-pisainan ny malagasy t@ alalan ny fampianarana ny leadership. io no tena natahoran ny frantsay sy ireo karana ireo satria nampifoha ny malagasy sy ny fahaizany ka vao mainka nampandroso ny Malagasy bebe kokoa @ fijerena indicateurs sy manokatra ny saina @ fahalalana hafa fa tsy imijery fotsiny izay eo ambany maso sy izay hanina hohanina. Aiza nefa isika izao? raha nitohy io fianarana io tena lasalavitra isika nefa indrisy, nopotehan ireo tsivalahara sy tsivanona ireo. misy farany nefa ny zava-drehetra ary ireo nanao ratsy t@ ity firenene ity dia hijinja ny nafafiny